February 2012 - QuraanKa MacnihiiSa Afka SoomaaLiGa
Kutubka Buluuqul Maraam Guurka Su\_aalo iyo jawaabo
Sawir Makkah Al Mukaramma Habeen
Labels: Maxaa Cusub, Sawiro Qurxoon
Makkah Al Mukaramma Sawir Qurxoon
Makkah Sawir Qurxoon
Makkah Al Mukaramma Sawir
Makkah Sawir !
Makkah (Carabi مكة ,
Makkatul Mukaramah, مكّة المكرمة
Waa magaalada oo ku dhashay Nabi Muxamed S.C.W.
waxa ayna ku taalaa wadanka Sacuudi Carabiya.
Makkah waa meesha uu Xaramka ku yaalo,
waana magaalada muslimiinta ugu Muhiimsan.
Sawir Makkah Al Mukaramma
Xurmeynta iyo u sama falka saaxiibbada waalidka, qaraabada, iyo xaasaska iyo kuwa la midka ah ee mudan xurmada.
Xurmeynta iyo u sama falka saaxiibbada waalidka, qaraabada, iyo xaasaska
iyo kuwa la midka ah ee mudan xurmada.
341. Ibn Cumar (A.K.R.) wuxuu yiri:
Baarinimo waxaa ugu saraysa inuu ninku u samo iyo axsaan falo aabihii saaxiibadiis.
342. Cabullaah ibn Diinaar (A.K.R.) wuxuu yiri:
Cabdullaah ibn Cumar baa nin reer miyi ah wuxuu kula kulmay jidka isagoo Makka u socda. Cabdullaah ibn Cumar baa salaamay,
oo yiri dameerka ila soo fuul uu fuushanaa,
waxna ka fuuliyey,
cimaamad madaxa u saarnaydna siiyey.
Cabdullaah ibn Diinaar wuxuu yiri:
Aniga ina Diinnaar ah baan waxaan iri:
Ibn Cumar, khayr Allaha ku siiyee, ninku waa reer miyi oo wax yar buuba ku qanci lahaa (ee Maxaad waxaan oo axsaan iyo wanaag ah ula jeeddaa aad u galeyso?)
Cabdullaah ibn Cumar (A.K.R.) wuxuu yiri:
Ninkaan aabihiisaa aabahay (Cumar ibn Khadaab) saaxiibki ahaa waxaana nebiga (S.C.W.) ka maqlay isagoo leh:
baarinimo waxaa u saraysa in uu ninku wanaajiyo oo uu axsaan iyo khery falo aabihiis saaxiibadiis.
Ibn Cumar baa markuu Makkah u safro oo uu ka daalo ku socodka hal u wadan jiray, kaga wareegi jiray si uu ugu socdo dameer taasoo uu u arkayey inay ugu fududdahay hasha,
wuxuuna madaxa ku xiran jiray cimaamad.
Marka isagoo malin dameerkii fuushan baa waxaa ka hor yimid nin reer miyi ah,
markaa buu (Cabdullaah ibn Cumar) ku yiri:
Sow ma tihid ina hebel, ee uu dhalay hebel ina hebel hebel?
Wuxuu yiri ninkii: Haah,
markaasuu Cabdullaah dameerkii siiyey oo yiri:
Kaxeyso; cimaamadiina siiyey oo yiri:
Tanna madaxa ku xiro.
Raggii la socdey baa qaarkood yiri:
Dembigaaga Allaha dhaafee ma ninkan reer miyiga ah baad siisay dameerkii aad fuuli jirtey iyo cimaamaddii aad madaxa ku xiran jirteyba?
Wuxuu yiri: Waxaan maqlay nebiga (S.C.W.) oo leh:
Waa baarinimo sare inuu ninku wanaajiyo oo u axsaan falo saaxiibadii aabihiis dadkooda markuu aabihii dhinto kaddib.
Ninkani aabihiisna wuxuu ahaa saaxiibka aabahay (Cumar ibn Khaddaab).
343. Abuu Usayd Maalik ibn Rabiicah as-Saacidi (A.K.R.) waxaa laga soo xigtay inay la fadhiyeen nabiga (S.C.W.) markii uu u yimid nin reer banii Salama ah oo ku yiri:
Rasuulkii Alloow! Ma jiraan haatan wax un aan wax ugu gali karo oo wanaag iyo samaan ah labadaydii waalid dhimashadooda kaddib?.
Nabigu (S.C.W.) wuxuu ku jawaabay:
Haah, waa in loo duceeyaa oo loo dembi dhaaf iyo naxariis dalbaa,
oo ballankii ay ka tageen la oofiyaa,
oo qaraabada xaggooda ka soo jeeda la wanaajiyaa oo loo samaan iyo axsaan falaa, saaxiibadoodna la xurmeeyaa.
344. Caa'isha (A.K.R.) waxay tiri:
Ugama maseyri jirin si aad ah xaasaska kale ee nabiga (S.C.W.)
sidii badneyd aan Khadiijo uga masayri jirey oo kale,
inkastoo aanan weligey arag.
Nabiga (S.C.W.) baa in badan hadal hayn jirey. Mar kastoo neef la qalana,
intuu qaybo u googooyo buu qayb u diri jirey Khadiijo saaxiibadeed.
Werin kale waxay leedahay:
Waxaan ku oran jiray nabiga (S.C.W.)
Waxaad mooddaa markii aad ka hadleyso Khadiija inaysan aduunka nag kaleba jirin!.
Markaasuu wuxuu yiraahdaa:
Waxay aheyd haweeney wanaagsan,
carruuna waa ii dhashay.
Werin kale baa waxay ahayd:
Mar walba uu ri qalo, wuxuu si joogto ah ugu diri jiray qaybo hilibka ka mid ah Khadiijo saaxiibadeed hadiyad ahaan, wuxuuna ka siin jiray in deeqda oo ku filan.
Werin kalena waxay aheyd:
Marka ri'da la qalo wuxuu oran jiray:
u geeya qaybo ka mida Khadiijo saaxiibadeed.
Marna waxaa dhacay,
in Haalah bint Khuwaylad,
Khadiijo walaasheed ay idan weydiisatay nebiga (S.C.W.) inay u soo gasho.
Wuxuu is yiri armay Khadiijo tahay,
aad buuna u laab kacay nabiga (S.C.W.) hillow iyo jaceyl darti (waayo labada walaalo Haalah iyo Khadiijo isku cod bay ahaayeen).
Markaasuu kor u dhawaaqay isagoo leh:
Allahayow tani waa Haalah bint Khuwaylad.
345. Anas ibn Maalik (A.K.R.) wuxuu yiri:
Waxaan mar isla safarnay Jariir ibn Cabdullaah al-Bujali (A.K.R.) markaasuu ii adeegaa mar walba, inkastoo uu iga weynaa da'ahaan (yacni uu ka weynaa Anas (A.K.R.)
Markaasaan anigu (Anas A.K.R) ku iri: Fadlan sidaa ha yeelin.
Wuxuu ku jawaabay: Waxaan arkay Ansaarta (Kuwii xaqa rumeeyey ee horay Madiina u degganaa) oo ugu adeegaya nebiga (S.C.W.) sidaa daacadda leh iyo wanaagga,
markaa baan waxaan dhaar ku maray haddii aan qof is raacno asxaabtii nebiga ka mida in aan u adeego.
Suurada Al - Masad
(1) Waxaa khasaaray Gacmihii Abuulahab, halaagmayna.
(2) Waxna uma tarin Xoolihiisii iyo wuxuu kasbadayna.
(3) Wuxuuna gali Naar Olal leh.
(4) Haweenaydiisii Qoryaha xambaari jirtayna (waxay gali Naar).
(5) Luqunteedana waxaa la yeeli Xadhig Liif ah.
Labels: Maxaa Cusub, Quraanka 114
(1) Waxaad dhahdaa «Nabiyow» waxaan ka magangeley Eebaha dadka barbaariya.
(2) Ee dadka xukuma.
(3) Ee ah Ilaaha dadka.
(4) Sharka «iyo xumaanta» waswaasiyaha qarsoon.
(5) Ee waswaasiya laabta «Qalbiga» dadka.
(6) «Kuwaas wax waswaasinayna» oo ah jinni iyo insiba.
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿5﴾
Labels: Maxaa Cusub, Quraanka 114, Tafsiirka
(1) Waxaad dhahdaa (Nabiyow) waxaan ka magangalay Eebeha Subaxa (abuuray).
(2) Wixii shar leh sharkiisa.
(3) Iyo Habeenka sharkiisa markuu madoobaado.
(4) Iyo sharka Sixirrowga wax ku tufa guntimaha.
(5) Iyo sharka Xaasidka wax Xasda.
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿4﴾
(1) Waxaad dhahdaa (Nabiyow) Eebe waa Kali (wehelna ma leh).
(2) Waana Sayid (deeqtoon).
(3) Eebe wax ma dhalin, isna lama dhalin.
(4) Wax la mid ahna ma jiro.
Suurada Al Faatixa
(1) Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.
(2) Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).
(3) Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.
(4) Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).
(5) adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).
(6) ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).
(7) Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna